Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.2 + bee! | Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး / သတင်းမဂ္ဂဇင်း
Aprilပြီလ 2020, 1 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အနုပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးလူတိုင်းထံသို့ဖြန့်ကျက် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းဖြင့်ရပ်ကွက်သတင်းထောက် "Mitsubachi Corps" အဖွဲ့ဝင် ၆ ဦး နှင့်အတူပေးပို့ပါလိမ့်မည်။
အထူးအစဉ်အလာ "ရိုးရာဖျော်ဖြေမှုအနုပညာ" + ပျား!
"Shoko Kanazawa၊ Ota ရပ်ကွက်မှစာလုံးအလှရေးသူ"
ဒီစာအုပ်ကိုမရေးခင် Shoko ဆုတောင်းတယ်။
ဒီအထူးခေါင်းစဉ်၏ "spinning" ၏စာတစ်စောင်ကိုရေးခဲ့သော Shoko
ဂျပန်ဂီတတူရိယာ "Koto" ကိုရှင်သန်နေစေသည့် "Masahiro Kaneko"
"လူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Timbre လက္ခဏာတွေရှိတယ်။
paulownia log မှဂျပန်ဂီတတူရိယာတစ်ခု koto ပြုလုပ်ရန် ၁၀ နှစ်ခန့်ကြာသည်။ပြီးစီးခဲ့ koto ၏ဘဝအသက် 10 လောက်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်း၏တိုတောင်းသောအသက်တာကြောင့်တယောကဲ့သို့ကျော်ကြားသောတူရိယာမရှိပါ။ကောင်းသောအသံနှင့် Aizu paulownia ထိုကဲ့သို့သော "ပေါ်" koto များအတွက်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။Kaneko မှစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်မူလတန်းနှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းများကိုလှည့်လည်။ `သင်တိုတိုတိုတိုကိုထိတွေ့ချင်သည် saying ဟုပြောပြီး၊ ကိုတို၏ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင်၏ koto ကိုမေ့သွားလျှင်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကလေးများသည်မမြင်ရဘဲသူတို့၏ဘဝကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ သင်အမှန်တကယ်အားစာအုပ်နှင့်ဓာတ်ပုံများဖြင့်သာကြည့်။ ထိတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ခံစားနိုင်သည် ဂျပန်မှာဒီလိုတူရိယာတွေရှိတယ်ဆိုတာငါပြောချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကနေစရမယ်။ "
စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းဖြစ်ပြီးကာတိုနှင့်အတူပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နေသော Kaneko သည် koto ကိုနားထောင်သည့်အခါကလေးများမည်သို့တုံ့ပြန်သနည်း။
"ဒါဟာခင်ဗျားရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ မူလတန်းကျောင်းကကလေးတွေကဒီကိရိယာကိုတို့ထိရတယ်။ သူတို့ကနားထောင်ပြီးသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုမေးရင်တောင်မှအရင်ကတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ အဲဒါကိုတို့ထိဖို့လိုတယ်။ တချို့ကလေးတွေကပျော်စရာကောင်းပြီးတချို့ကပျင်းစရာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါတို့မထိဘူးဆိုတာတော့မသိဘူး။ တကယ့်အတွေ့အကြုံကအကောင်းဆုံးပါ။ "
Koto လုပ်သည့်အခါ Kaneko သည် Aizu ၏ paulownia နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာကြောင့်ထူးခြားသနည်း၊ အခြား paulownia သစ်ပင်များနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
သစ်လုံးတစ်ခုမှ koto ကိုပြုလုပ်ရန် ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာသည်။ အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် Paulownia ကိုဖြတ်ရန် ၅ နှစ်ခန့်ကြာသည်။ ထို့နောက်ခြောက်သွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ စားပွဲ၌ ၃ နှစ်၊ အိမ်တွင်း ၁ နှစ် ၂ နှစ်နှင့်စသည်။ အဲဒါဟာ ၅ နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ Niigata paulownia နဲ့ Aizu paulownia ဟာအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ Chiba နဲ့ Akita နှစ်ခုလုံးကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Aizu ကအကောင်းဆုံးပါ။ paulownia ကိုဘယ်လိုအမျိုးအစားမျိုးရေးလဲ။ "
ဟုတ်ကဲ့၊ paulownia ဟာသစ်ပင်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာမြက်မိသားစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခြား conifers တွေနဲ့မတူဘဲနှစ်ပေါင်းရာချီကြာရှည်မခံပါဘူး။ ၆ နှစ်မှ ၇၀ အပြီးသေဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ koto ရဲ့သက်တမ်းဟာနှစ် ၅၀ လောက်ရှိပြီ။ အဘယ်သူမျှမအရောင်တင်မျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားသည်။ "
ဂျပန်ရိုးရာဂီတကိုမသိသောသူများအတွက် Koto ကိုအလွယ်တကူသိနိုင်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။
"YouTube ။ ကျွန်တော့်သားက Sophia တက္ကသိုလ်မှာ koto club ပါ။ ငါ့သားနဲ့အတူငါဖျော်ဖြေပွဲအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီး YouTube မှာတင်တယ်။ Sophia တက္ကသိုလ်ကိုရှာခဲ့တယ်။ အားလုံးချက်ချင်းပေါ်လာတယ်၊ ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီကစပြီးတက်လာတယ်။ က။
ဒီအထူးအင်္ဂါရပ် "Tsumugu" ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကာလကနေလှည့်ထွက်သွားခဲ့သည့်ယနေ့လူငယ်များသည်အသစ်သောအရာများပြုလုပ်သည့်တေးဂီတတူရိယာများပြုလုပ်ရာတွင်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဂျက်ဇ်ဂီတတွင်စန္ဒရားနှင့်ပူးပေါင်းသည့်တိုင်အသံတူရိယာပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် Aizu paulownia ၏ခက်ခဲသောအကြောင်းအရာကိုငါအသုံးပြုသည်။ သီချင်းဟောင်းများအတွက်ပျော့ paulownia ကိုသုံးသည်၊ သို့သော်ခေတ်သစ် အကြိုက်သီချင်းတစ်ပုဒ်တီးချင်သောအဆိုတော်များအတွက် koto အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုသီချင်းအတွက်သင့်လျော်သောအသံကိုထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ "
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။Koto ထုတ်လုပ်မှုကို Kaneko Koto Sanxian ဂီတတူရိယာစတိုးဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်။ Koto ၏ဖျော်ဖြေရေးသတင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းတွစ်တာတွင်တင်ထားသဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။
Kaneko Koto Sanxian ဂီတတူရိယာဆိုင်
အလုပ်ချိန် 10: 00-20: 00
"Yasutomo Tanaka" သည်ရိုးရာအသံများကိုနည်းပညာဖြင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်
Y ကုမ္ပဏီ၏အေဂျင်စီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးမလေးရှားအခြေစိုက်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုပံ့ပိုးရန်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ တရုတ်နိုင်ငံသို့ခရီးထွက်ခဲ့သည်။ သူတို့တွင်ဂီတတူရိယာစက်ရုံတစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်ဂီတတူရိယာများကိုညှိရန်နှင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ငါသင်ယူခဲ့တဲ့ဗဟုသုတဟာငါ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထဲရောက်နေပြီ။ "
Shinobue ၏ပစ္စည်းဖြစ်သော ၀ ါး (အမျိုးသမီးဝါး) ကိုရိတ်သိမ်းပြီးခြောက်သွေ့ပြီးသုံးနှစ်အကြာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ဤအတောအတွင်းသုံးပုံနှစ်ပုံအက်ကွဲလိမ့်မည်။ကွေးဝါးကိုမီးနှင့်အပူပေးသည်။ မစ္စတာတန်နာ၏အထူးသည်သုံးနှစ်ခွဲခန့်အကုန်ပြီးစီးမည့်ပီပီသွင်ပြင်လက္ခဏာကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုစီရှိပွဲတော်တစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလေသံနှင့်ညှိရန်ဖြစ်သည်။ "Kobo brush ကိုမရွေးနဲ့" ဆိုတာကပုံပြင်ဟောင်းတစ်ခုပါ။
ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တွေရှိသလိုတီးတိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒေသတွင်းဂီတလည်းရှိတယ်၊ အဲဒီမှာအသံလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအဲဒီဂီတအတွက်လိုအပ်တဲ့အသံတွေလုပ်ရမယ်။ ”
"ကွင်းများနှင့်အတူကွင်းများအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ။ မြေပေါ်တွင် မူတည်၍ Hz နှင့်အစေးသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အသံလှိုင်းများသည်ပြွန်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သဘာဝဖြစ်သောကြောင့်ပြွန်ပျက်သွားသည်။ အသံလှိုင်းများသည်လည်းပုံပျက်နေသည်။ အသံလှိုင်းများထွက်လာသည် အကယ်၍ ၎င်းသည်သာယာသောအသံသို့မဟုတ်ဆူညံသံကဲ့သို့အသံမြည်လျှင်သို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လျှင်ပြွန်၏ပုံသဏ္shာန်လှုပ်သည်။ အသံတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက်ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ပြင်ဆင်ပါ။ သွားရန်
"ဒါကမှန်တယ်။ ဒါကြောင့်အသံထွက်တာဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတယ်၊ insideရိယာနဲ့ပုံသဏ္relatedာန်ဆက်စပ်နေတယ်။ ခဲယဉ်းတယ်။ ကျွန်တော်ကလေးဘဝတုန်းက Asakusa ကိုသွားပြီးပုလွေဆရာကပုလွေဝယ်ခဲ့တယ်။ ပြတင်းပေါက်ရဲ့အတွင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးရှုပ်ထွေးနေတယ်။ ငါမှုတ်တဲ့အခါအသံထွက်မရှိဘူး။ ပြီးတော့ငါ့ဆရာကပြောတယ်သင်တန်းကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့အဆူညံသံ၏မူလအစဖြစ်သည်။ အသံရောင်းခဲ့ပြီလားအရင်ကပုလွေကိုဝါသနာတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့အသွင်သဏ္withာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ကုမ္ပဏီမှာဂီတတူရိယာများပြုလုပ်ရန်သင်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအလုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ”
"ကျွန်တော်ကောက်ယူခဲ့တဲ့ ၀ ါးတွေကိုသုံးလို့မရဘူး၊ သုံးနှစ်လောက်ခြောက်အောင်လုပ်ရမယ်။ သုံးပုံနှစ်ပုံကကျိုးသွားပြီးကျန်သုံးပုံတစ်ပုံဟာပီပီဖြစ်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ကွေးနေတယ်။ နည်းနည်းပျော့ပျောင်းသောသစ်သားဖြင့်ဖြောင့်ပါ။ သင်ပစ္စည်းတစ်ခုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကထိုအရာကိုပြင်ဆင်သည့်အခါ၎င်းကိုဖိအားပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်အပေါက်တစ်ပေါက်ချက်ချင်းပေါက်လျှင်ကွဲအက်သွားလိမ့်မည်။ တစ်နှစ်တစ်နှစ်။ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်မှအာရုံကြောများအမြောက်အမြားယူသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပစ္စည်းများကိုထိထိရောက်ရောက်မပြုလုပ်ပါက၊
ဒီအထူးလက္ခဏာက "Tsumugu" ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာ Tanaka အစဉ်အလာလည်ရန်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
"အဲဒါကဟောင်းနွမ်းမှုအသစ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့" ပေါင်းစည်းမှု "တစ်ခုလား။အဟောင်းကိုဖွဲ့စည်းပုံဟောင်းနွမ်းသောပုံစံနှင့်အတူထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။Doremi ၏ပုလွေသည်ယခုအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ငါခေတ်ပြိုင်တေးဂီတကိုဖွင့်ချင်တယ်၊ ငါလည်းဂျက်ဇ်ဂီတတီးချင်တယ်။စန္ဒရားအတိုင်းအတာနှင့်အတူတီးခတ်နိုင်သည့်ပီပီအသံမရှိသော်လည်း Shinobue သည်အနောက်တိုင်းတန်းတူစိတ်ထားကိုလိုက်ဖက်သည်။ဒါဟာပြောင်းလဲနေပါတယ်။ "
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။Flute စတူဒီယိုသည် Kazuyasu Flute စတူဒီယိုသည် Flute ကိုစတင်လိုသောသူများနှင့်မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုမသိသူများအတွက်အကြံဥာဏ်များလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ကျေးဇူးပြု၍ ပင်မစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။
Whistle စတူဒီယို Kazuyasu
7-14-2 ဗဟို, Ota-ku
ရုံးချိန် - ၁၁း၀၀ မှ ၁၉း၀၀ နာရီ
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသော "Living National Treasure" သည် Fumiko Yonekawa II နှင့်ဆက်နွှယ်သော
"ဒုတိယမျိုးဆက် Fumiko Yonekawa" သည် Jiuta နှင့် Jiuta (* 80) ၏ဖျော်ဖြေသူအဖြစ်အနှစ် ၈၀ ကျော်တက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ကိုတို၏သက်ရှိအမျိုးသားရတနာ (အရေးကြီးသောယဉ်ကျေးမှုမရှိသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု) အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသော်လည်းအနုပညာလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေခြင်းသည်အထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။
“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာဖျော်ဖြေပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကျေနပ်ရောင့်ရဲတဲ့အထိလေ့ကျင့်တယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုမသက်မသာဖြစ်စေတယ်။ သီချင်း၊ အကြောင်းအရာနဲ့အသုံးအနှုန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားတယ်။ အဲဒါကိုပြဖို့အရမ်းခက်တယ်။ နားလည်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့လူတိုင်းကိုကြားစေချင်တယ်။
အီဒိုကာလအတွင်းကျောင်းစစ်ဆေးရေး (မျက်စိကန်းသောဂီတပညာရှင်) မှပေးအပ်ခဲ့သည့်ယနေ့ခေတ်အထိပေးအပ်ခဲ့သော Jiuta နှင့် koto သီချင်းများ။ကျောင်းတစ်ခုစီ၏ထူးခြားမှုနှင့်အရသာအပါအ ၀ င်သီချင်း၏နားလည်မှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေပြီးထိုအဆင့်သို့ရောက်ရန်အသံမထက်သင်တို့၏ရှေ့မှောက်ရှိပရိသတ်ကိုပြပါ။ နင့်ကိုငါချစ်တယ်ဆိုရင်တောင်ငါဘယ်တော့မှရပ်တန့်ရုံမကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးမြှုပ်နှံနေရုံတင်မကဘူး။နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖော်ပြချက်နောက်ကွယ်တွင်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအနုပညာကိုကျွမ်းကျင်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်စိတ်ဓာတ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကိုခံစားရနိုင်သည်။
"စင်စစ်အားဖြင့်စင်မြင့်ဟာကြောက်စရာကောင်းနေတုန်းပဲ။ သင်အလုံအလောက်လေ့ကျင့်ထားလျှင်ပင်၊ သင်စင်ပေါ်မှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထုတ်နိုင်လျှင်၊ တစ်ဝက်ကိုထုတ်မထုတ်နိုင်ပါ။ "
အနုပညာလိုက်စားခြင်း၏ပြင်းထန်မှုကိုသိရန်သဲလွန်စတစ်ခုမှာအစောပိုင်း Showa အချိန်ကာလမတိုင်မီအထိလေ့ကျင့်ခဲ့သောသင်တန်းဖြစ်သည်။အေးခဲနေသောလေ့ကျင့်မှုကဲ့သို့သောကန့်သတ်ချက်ထဲသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးခြင်းဖြင့် koto နှင့် sanxian (shamisen) ကိုဆက်လက်ကစားနေခြင်းအားဖြင့်ဆောင်းတွင်းလေနှင့်ထိတွေ့နေစဉ်သင်၏အာရုံပျောက်ဆုံးသွားပြီး၊ တေးသီချင်းတစ်မျိုးတည်းကိုထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါဆိုရလျှင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်အရည်အချင်းကိုမြှင့်တင်ရန်လေ့ကျင့်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
“ မျက်မှောက်ခေတ်ပညာရေးဟာပြောင်းလဲသွားပြီ၊ ဒါကြောင့်သင်လိုချင်ရင်တောင်အဲဒီလိုသင်ကြားဖို့လွယ်ကူတယ်လို့မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ခန်းစာတွေကအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ သင်တန်းအားလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်။
မစ္စတာယိုနာကာဝါကအနုပညာနှင့် ပတ်သက်၍ သူကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများကိုတင်းကြပ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လူတွေကိုသင်ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။ ငါကိုယ်တိုင်ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတယ်”
မစ္စတာယွန်ကာဝါသည်တပည့်တော်များအားတိုက်ရိုက်ပေးသောလမ်းညွှန်ချက်တွင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ချင်းစီကိုအနက်ဖွင့်ခြင်းအပြင်အခြားအရေးကြီးသည့်အရာများလည်းပါ ၀ င်သည်။၎င်းသည်နှလုံးရောဂါဖြင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်သည်။
"သီချင်းတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်" နှလုံးသားရှိတယ်။ တပည့်တွေရဲ့အနုပညာတွေကိုဘယ်လိုစုဆောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးတချို့လူတွေကအဲဒါကိုနားလည်ပြီးအခြားသူတွေကနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တပည့်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထည့်တွက်စဉ်းစားခြင်းကအလွန်ကောင်းပါတယ်။ နားလည်ရလွယ်ကူသည့်သီချင်းဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကယင်းကိုတီးမှုတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာသည်နှင့်အမျှငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်းနားလည်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင် ယူ၍ သင်ခန်းစာယူပါ။ "
ဒီပြတ်ပြတ်သားသားအနုပညာနှင့်ဆက်ဆံရန်နည်းလမ်းမှာပထမ ဦး ဆုံး Fumiko Yonekawa ၏သင်ကြားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်မစ္စတာယိုနာကာဝါ (အမည်ရင်း Mr. Misao) နှင့်သူ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဒေါ်နှင့်တူမတို့၏ဆက်ဆံရေးရှိသည်။သူသည်ကလေးဘဝကိုကိုဘိုတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးမျက်မမြင်နှင့်ကိုတိုမာဆရာဖြစ်သည့်မူလတန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရပြီးနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အစ်မနှင့်လေ့လာရန်ညဥ့်အခါတိုကျိုသို့သွားခဲ့သည်။ထို့နောက်သူသည်သူ၏အဒေါ်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့နှစ် ဦး အကြားဆက်ဆံရေးသည်“ ဆရာနှင့်တပည့်” နှင့် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် (Showa ၂၉) တွင်“ မိခင်နှင့်မွေးစားသမီး” သို့ပြောင်းသွားသည်။
"ငါဘာမှမသိဘဲနဲ့ငါ့အဒေါ်ရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်။ Uchideshi တွေအများကြီးရှိတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ငါကကြောက်စရာအဒေါ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ သူ့ကို" ဆရာ "လို့မခေါ်နိုင်ခဲ့၊ အကြိမ်များစွာလည်းသတိပေးခဲ့တယ်။ "အန်တီ။ ငါ koto ကိုကစားရုံပဲ။ ပြီးတော့အခါအားလျော်စွာဆုလာဘ်များနှင့်ကောင်းသောအရာများရှိသည်ဟူသောရိုးရှင်းသည့်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးဆန်နေသည်။ "
သူ၏ယခင်လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ထိုမိန်းကလေးသည်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။Fumi Katsuyuki(Fumikatsu) ကျယ်ပြန့်၏နာမ၌အသုံးပြုခဲ့သည်။သူသည်အနုပညာကိုသာလေ့လာသင့်သည်ဟုသူကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများကိုအမြဲတမ်းပြောခဲ့သည် Yonekawa (ကွယ်လွန်) သည်တာဝန်ခံဖြစ်သည်။သူ၏ဆရာမနှင့်ညီမတို့၏အတွေးများကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက် Mr. Yonekawa သည်အနုပညာနှင့်ဆက်လက်ရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် (Heisei 1995) ပထမမျိုးဆက်ကွယ်လွန်သွားပြီးလေးနှစ်အကြာတွင်သူသည်ဒုတိယမျိုးဆက် Fumiko Yonekawa ဖြစ်သည်။သူကထိုအချိန်ကသူ၏ခံစားချက်များကိုပြောခဲ့သည်။ “ ငါကိုယ်တိုင်တကယ်အလုပ်လုပ်တာရှိမရှိဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတစ်ခုပဲ။ ”
"တစ်ချိန်ကအမေကအနုပညာကကျွန်တော့်ကိုကူညီတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါငယ်ငယ်တုန်းကအဲဒါကိုသိပ်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ငါ့ရဲ့နောင်တော်မှာနှလုံးသားကြီးရှိတယ်။ သူကြီးပြင်းလာခဲ့တာ။ ရုံးအလုပ်ကိုငါမသိခဲ့ဘူး၊ ငါ့မိသားစုအကြောင်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ငါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကထောက်ခံနေတုန်း koto ကိုကစားရုံနဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါ့အရင်ကအမေ၊ အနုပညာဆရာတစ်ယောက်နဲ့အရာအားလုံးကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့မိဘတစ် ဦး ပါ။ သူသည်အနုပညာအတွက်တင်းကျပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းအနုပညာလောကမှထွက်ခွာသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူသည်အလွန်ကြင်နာတတ်သူဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များလည်းသူ့ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ ပထမမျိုးဆက်၏စွမ်းအားသည်ကြီးလှ၏။
ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောဖြစ်တည်မှုဖြစ်သည့်ယခင်၏မျှော်မှန်းချက်ကိုအမွေခံ, မစ္စတာ Yonekawa အနုပညာဖျော်ဖြေခြင်း၏အစဉ်အလာအပေါ်မျိုးဆက်သစ်မှတက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။အထူးသဖြင့်မူလတန်းနှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းများတွင်ဂျပန်ဂီတတူရိယာများကို အသုံးပြု၍ ဂီတပညာကိုလူကြိုက်များအောင်ပြုလုပ်နေသည်။လက်ရှိတွင်ဂျပန်ဂီတတူရိယာအလေ့အကျင့်ကိုမူလတန်းနှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းများအတွက်သင်ကြားပို့ချမှုလမ်းညွှန်ချက်များတွင်မသင်မနေရသင်တန်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သို့သော်မစ္စတာယိုနာကာဝါသည်ဂုဏ်ပြုဥက္ကis္ဌဖြစ်သောဂျပန်ဆန်ကီကူအသင်း (* 2) သည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကူညီသည်။ မူလတန်းနှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းများသို့ koto အများအပြားလှူဒါန်းခြင်းအပြင်တိုကျိုရှိမူလတန်းနှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းများသို့လူငယ်အဆိုတော်များကိုဖျော်ဖြေပွဲများသရုပ်ပြပြီးဂီတတူရိယာများကစားခြင်းအတွက်လက်စွဲလမ်းညွှန်များပေးခဲ့သည်။Iemoto Sochokai တွင်မစ္စတာ Yonekawa သည် Ota Ward ရှိမူလတန်းနှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းများတွင်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမစ္စတာ Yonekawa ကိုယ်တိုင်ကျောင်းသို့သွားပြီးကလေးများနှင့် koto နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်။
"ငါသည်ကလေးများရှေ့တွင်ပျိုးခင်းတေးသီချင်းများနှင့်ကျောင်းသီချင်းများကိုဖွင့်သော်လည်း၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူသီချင်းဆိုကြပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်လက်သည်းများကိုလက်ချောင်းများပေါ်တွင်တင်ပြီး koto ကိုထိမိသည့်အချိန်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ ဂျပန်ဂီတယဉ်ကျေးမှု၏အနာဂတ်အတွက် ကလေးတွေကိုအရင်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ငါတို့ကျောင်းကိုလာတဲ့ကလေးတွေတောင်မှသူတို့ကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပြီးကိုတိုကစားကြလိမ့်မယ်။ "
လာမည့်မျိုးဆက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်သည့်အနေဖြင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဂျပန်ရိုးရာဖျော်ဖြေအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအခြေခံသည့် manga နှင့် anime တို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီးလူငယ်မျိုးဆက်များအကြားအဓိကလူကြိုက်များလာသည်။၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်ရိုးရာဖျော်ဖြေမှုအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုသူတို့စိတ်ဝင်စား၊ စိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုသည် koto တွင်လည်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးအမှန်မှာ Sochokai ၏တပည့်များသည်သင်တန်းပို့ချသူများဖြစ်သည့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာသို့လှည့်လည်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပြဇာတ်တွင်ဇာတ်ကောင်များ၏မူလ koto ကိုလေးစားခြင်းဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူ။ကျောင်းသားအချို့လည်းကစားလိုကြပြီး၎င်းတို့သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသနေသည်။ဂန္ထဝင်သီချင်းများနှင့်အတူလျှောက်လှမ်းနေသည့်မစ္စတာယွန်ကာဝါကသူသည်ဤမျှော်လင့်ချက်အတွက်“ ပိုမို၍ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်” ရပ်တည်ချက်ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
"မင်းကိုစိတ် ၀ င်စားစေမယ့်အ ၀ င်တွေကအချိန်ကာလတွေနဲ့အညီထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာသဘာဝကျပါတယ်။ ဂျပန်ဂီတလူ ဦး ရေတိုးပွားလာတဲ့အတွက်ငါကျေးဇူးတင်တယ်။ သီချင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်သဘာဝကျကျဆက်လက်တည်ရှိနေမှာပါ။ သို့သော်ဂန္တ ၀ င်သီချင်းများမှ ၀ င်ရောက်လာသူများသည်နောက်ဆုံးတွင်ဂန္ထဝင်များကိုလေ့လာပြီးအခြေခံများကိုကောင်းစွာလေ့လာကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခက်ခဲသည်ဟုဆိုလိုပါသလား။ မဟုတ်ဘူးလား? "
"အိုတာပွဲတော်"မတ်လ 2018,3၏ပြည်နယ်
အင်တာဗျူးအပြီးမှာ "Yonekawa အတွက်" အနုပညာကဘာလဲ "လို့ထပ်မေးတဲ့အခါသူကစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးနောက်သူသည်သူ၏နှလုံးသားကိုဂရုတစိုက်ရှာဖွေရန်ထိုစကားလုံးများကိုတစ်လုံးချင်းစီကောက်ယူခဲ့သည်။
"ကျွန်တော့်အတွက်အနုပညာကကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ အလေးချိန်လည်းရှိတယ်။ စကားလုံးတွေကိုထုတ်ပြောဖို့ခဲယဉ်းတယ်။ ဒါကငါ့ရဲ့အရင်ကျူးကျော်သူကပေးတဲ့သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်မှုပါပဲ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့မင်းဟာ koto ကိုကစားရင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တယ်။ ငါဆက်အလုပ်လုပ်ချင်တယ် ငါ့ဘဝ၏ကျန်ဘဝအတွက်အနုပညာ "
* ၁ အီဒိုခေတ်အတွင်း Jiuta (shamisen ဂီတ) နှင့်ကျောင်း၏စစ်ဆေးခြင်း (မျက်စိကန်းသောဂီတပညာရှင်) မှပေးအပ်သည့် koto သီချင်းများအကြားရှိ ခွဲခြား၍ မရသောဆက်သွယ်မှုမှဆင်းသက်လာသောအနုပညာဂီတ။"Song" သည်တူရိယာတစ်ခုချင်းစီ၏တေးဂီတတွင်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်ပြီးတူညီသောဖျော်ဖြေသူသည် koto ကစားခြင်း၊ shamisen တီးခြင်းနှင့်သီဆိုခြင်းတို့ကိုတာဝန်ယူရသည်။
ရိုးရာတေးဂီတ၊ ကိုတို၊ ဆန်ကီကူနှင့်ရှကူဟာချီတို့ပျံ့နှံ့စေရန်နှင့်သီချင်းသုံးပုဒ်၏တစ်ခုချင်းစီကိုဖလှယ်ခြင်းဖြင့်ဂျပန်ဂီတယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်။
Jiuta / Ikuta စတိုင်ဂီတပညာရှင်။Sochokai (Ota Ward) မှသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။Japan Sankyoku အသင်း၏ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥက္ကဌ။ 1926 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။သူ၏အမည်မှာ Misao Yonekawa ဖြစ်သည်။ဟောင်းနာမကိုအမှီ Fumikatsu ဖြစ်ပါတယ်။ 1939 ခုနှစ်တွင်တိုကျိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ပထမ ဦး ဆုံး uchideshi ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင်သူ၏ပထမဆုံးတပည့်ဖြစ်သူ Bunshizu ကမွေးစားခဲ့သည်။ ခရမ်းရောင်ဖဲကြိုးဖြင့်တံဆိပ်ကို ၁၉၉၄ တွင်ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ တွင်ဒုတိယမျိုးဆက် Fumiko Yonekawa အမည်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်အဖိုးတန်သရဖူကိုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အရေးပါသောယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပိုင်ဆိုင်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Japan Art Academy ဆုနှင့်လက်ဆောင်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
ကိုးကားချက် - Sochokai မှတည်းဖြတ်သော "Fumiko Yonekawa လူများနှင့်အနုပညာ" Eishi Kikkawa (၁၉၉၆)